Indlela yokuguqula iinjongo zeSpeyin kwiIzaziso
NgesiNgesi, kuqhelekileyo ukudala isibhengezo ngokufaka isisombululo "-ngoku" kwisiphelo sesiphakamiso . NgesiSpeyin, sinokwenza into elula ngokulula - yenza isilengiso ngokufaka isisombululo -mente kwifom ethile ethile.
Indlela yokusebenzisa -mente
I-- mente ifakwe kwinqanaba elincinci lomfazi wesichazi. Ngokomzekelo, uhlobo oluthile lomfazi lwe- ruidoso (umsindo) luyi- ruidosa , ngoko i-adverb ifomu i- ruidosamente (ngokukhawuleza).
Izichasti ezihlukeneyo ezifayo zamadoda kunye neentlobo zowesifazane zizo ezo zihlomelo zazo zichazwe -o , ezifana neeto (ezolileyo). Ukudala isibhengezo esifanayo, utshintshe ukuphela ku -a , kwimeko yeetaeta , kwaye wongeza -mente . Ngaloo ndlela isikhangiso esifanelekileyo se- quieto sisetamente (ngokuthula).
Ekubeni izichazi ezininzi azifani nezifowuni okanye iintlobo zesetyhini, isiqulatho sisoloko sifakwe kwinto enye. Ngoko isichazi esinesihluthulelo (sibuhlungu) singaguqulwa sibe sisibhengezo sesithathu , kwaye u- feliz (onoyolo) unokuguqulelwa ngokulula ibe yi- felizmente (ngovuyo).
Imizekelo yeziNjongo kunye neZilumkiso ezifanayo
Nazi ezinye zezichasti eziqhelekileyo zesiSpanish ezilandelelanayo- izihlomelo ze- PA kunye neenguqulelo ezinokwenzeka. Qaphela ukuba kwiimeko ezimbalwa iinguqulelo zezivakalisi zaseSpain zihlukile kunezinto onokuzilindela ngokuzongeza "-ly" kwisiNgesi esifanayo.
i-abierto (evulekile), abiertamente (ngokucacileyo, ngokucacileyo)
i-aburrido (i-boring), i- aburridamente (ngendlela ekhohlakeleyo)
(ubude, phezulu), altamente (kakhulu)
i-cansado (ediniwe), i- cansadamente (ngokukhawuleza, ngokukhawuleza)
común (eqhelekileyo), comúnmente (ngokuqhelekileyo, ngokuqhelekileyo)
ukuxhamla (obuthathaka), ukuxhatshazwa ( okubuthathaka )
dulce (amnandi, unomusa ), utyunde (ngokukhawuleza, ngobumnene)
ukulingana (ukuphutha), equivocadamente (ngephutha)
i-feo (embi, i-dreary), i- feamente (ngokukrakra, kakubi)
enkulu (enkulu, enkulu), i- grandemente (ngokugqithiseleyo, kakhulu; "ngokubanzi" inokuguqulelwa ngokusebenzisa i- gran parte okanye i- parliament )
inteligente (onobuqili), u- inteligentemente ( ngokukhaliphile )
i-justo (efanelekileyo, eyiyo, eyiyo), i- justamente (ngokufanelekileyo, ngokufanelekileyo, ngokuchanekileyo)
lento (kancane), lentamente (kancane)
i-limpio (ecocekileyo), i- limpiamente (ngokucocekileyo, ngokunyaniseka okanye ukunyaniseka)
i-lindo (enhle, enhle), lindamente ( ngokuhle , ngokukhawuleza)
llana (flat, level, non-humble , modest), llanamente (ngokucacileyo, ngokucacileyo, ngokuthe ngqo)
loco ( ubuqili ), locamente (ngokungabi nongqondo okanye ukumodareyitha)
i-nuevo (entsha), i- nuevamente (i- new , kwakhona; indlela eqhelekileyo yokuthi "esandula" isazi )
i-pobre (ihlwempu), i- pobremente ( iphosakele )
rápido (ngokukhawuleza, ngokukhawuleza), rápidamente (ngokukhawuleza, ngokukhawuleza)
ihlambalaza (ihlambalaza), i- repugnmente (ihlazo)
raro (ezingaqhelekanga), raramente (ngokungaqhelekanga)
i-rico (isisityebi), i- ricamente (ngokucebileyo, kakhulu, ininzi)
sano (impilo), i- sanamente (impilo, impilo)
i-seco (eyomile), i- secamente (ngokukhawuleza xa ibhekisela kumsebenzi;
elula (elula, elula), ngokulula (ngokulula, ngokuthe ngqo)
sucio (ezingcolileyo), suciamente (ngendlela engcolileyo okanye ecocekileyo, ithetha)
tonto (isisiphukuphuku, sisisidenge), tontamente (ubuwula, budenge)
ukuthula (ukuzola, ukuzola), i- tranquilamente (ngokuthula, ngokuthula)
Ukuphepha Ukusetyenziswa ngokweqile kwe- Adverbs
Nangona i-adverb ikhona akukho nto ithetha ukuba yindlela kuphela okanye ekhethiweyo yokubonisa into ethile.
Okokuqala, ngeSpanish, ngaphezu kweNgesi, kuyaqhelekileyo ukusebenzisa ibinzana elibhengezo nangona isalathisi esisodwa sinakho. Umzekelo, ngelixa i- baratamente isetyenziselwa ukubonisa ukuba into ethengiweyo okanye eyenziwe yancinci, kuqhelekile ukuba kutsho i-precio bajo (ngexabiso eliphantsi) okanye nokuba ne- barma ye-forma (ngendlela ephantsi).
Okwesibini, kukho izichazi ezimbalwa eziqhelekileyo zisetyenziswe njengezihlomelo nangona iifom ezihlukeneyo zikhoyo. Phakathi kwezona zinto ziqhelekileyo yi- rápido kunye neento , ezingenakuthetha nje "ukukhawuleza" kunye "nokuphuza," ngokulandelanayo, kodwa "ngokukhawuleza" kunye "ngokukhawuleza."
Upelo kunye nokuchongwa kwe- Adverbs
Njengoko kule mizekelo ingentla ye- débil ne- rápido , ukuba isiphakamiso sinombonakaliso wokubhaliweyo , isalathisi esifanayo- siyabonisa uphawu lokubhaliweyo, nangona ukugxininiswa okuthethiweyo kuya kubakho kwi-syllable yokugqibela.
Xa zimbini okanye ngaphezulu- izilomelo zisetyenziselwa uchungechunge, i-suffix -mente isoloko ichithwa kuzo zonke kodwa isibhengezo sokugcina. Oku kuqhelekileyo kwiSpanish ebhaliweyo. U mzekelo:
Habla lenta y claramente. (Uthetha ngokukhawuleza nangokucacileyo.)
Anda cuidada, dolorosa y pacientemente. (Uhamba ngokucophelela, ngokubuhlungu nangomonde.)
Creo que estás equivocado: i-sad, absoluta y totallement equivocado. (Ndicinga ukuba uphosakele - ngokudabukisayo, ngokugqithisileyo kwaye ukuphosakeka ngokupheleleyo.)
Indlela yokudibanisa "Vukani" (ukukhusela)
Amanani abantu baseChina baseDynastic
Imigaqo yeGalufa-Umgaqo-33: IKomiti
1897-UFO Crash e-Aurora, eTexas
Indlela uMikayeli oyiNtloko uMikayeli angakukhusela ngayo ebubini obubi